Ireo efatra mahatalanjona mamadika ny nofinofisin'izy ireo ho tena zava-misy
Home » Vaovao momba ny dia momba ny fanabeazana » Ireo efatra mahatalanjona mamadika ny nofinofisin'izy ireo ho tena zava-misy
Jolay 17, 2018
Hilton sy Eden Group Company Limited, miaraka amin'ny minisiteran'ny fandraisam-bahiny sy fizahan-tany, dia nanokatra ny ivon-toeram-piofanana momba ny asa aman-draharahan'ny Hilton ao Nay Pyi Taw tamin'ny volana septambra 2015. Manolotra mari-pahaizana roa taona eo afovoan'ny asa birao anoloana, fikarakarana trano, serivisy sakafo sy zava-pisotro ary koa culinary sy mofomamy.
Ny efatra amin'ireo nahazo diplaoma 28 tamin'ny andiany voalohany an'ny fandaharan'asan'ny Centre Vocational Training Center dia hanohy ny asa fandraisam-bahiny any Dubai rehefa avy niasa manontolo andro tao amin'ny Hilton Nay Pyi Taw.
Lwin Moe Oo, Shein Htet Aung, Moe Moe Swe ary Pyei Phyo Swe - dia nanatevin-daharana ny ivon-toeram-piofanana momba ny fiofanana arak'asa Hilton tsy nisy traikefa matihanina teo aloha. Tamin'ny alàlan'ny fiofanana arak'asa mahery sy ny fampianarana teny am-piasana avy amin'ireo mpampiofana ao amin'ny Hilton, no nahitan'izy ireo ny làlan'ny asany tao amin'ny departemantan'ny fikarakarana trano.
Helen Jacobe, Mpitantana Jeneralin'ny Cluster ao amin'ny Hilton Myanmar dia nilaza hoe: “Tena mirehareha izahay amin'i Lwin Moe Oo, Shein Htet Aung, Moe Moe Swe ary Pyei Phyo Swe. Tena mahavariana tokoa ny mahita ny toerana efa nitondran'izy ireo ny asa mafy sy ny hetahetany. ”
On 25th Jolay, Lwin Moe Oo sy Shein Htet Aung dia hanatevin-daharana an'i Hilton Jumeirah, Dubai The Walk ary Moe Moe Swe ary Pyei Phyo Swe dia hanatevin-daharana an'i Hilton Jumeirah Beach Resort. Moe Moe Swe, izay mamelona fianakaviana iray misy zandriny roa, dia nilaza hoe: “Faly be aho mandeha any. Tsy azoko an-tsaina ny naka fiaramanidina, na dia handeha ho any Dubai aza. Ankehitriny, handeha hiasa any Dubai aho ho an'ny trano fandraisam-bahiny malaza iraisam-pirenena, ny Hilton. Zava-bita lehibe tokoa izany ho ahy, na ho an'ny asako na ho an'ny fianakaviako ”.
Nandritra ny fotoana niasan'izy ireo ho mpiasan'ny Hilton Nay Pyi Taw dia naneho ny tena toetran'ny Hilton tamin'ny vahiny sy ny mpikambana ao aminy izy efa-dahy. Izany dia niafara tamin'ny fandraisan'izy ireo ekipa iray loka tamin'ny volana. Nanolo-tena sy navitrika izy ireo, ary vonona handray andraikitra fanampiny.
Ireo mpianatra niavaka ireo dia nanomboka ny asany tamin'ny fandraisam-bahiny tamin'ny taona 18 tamin'ny fisoratana anarana tao amin'ny programa Hilton Vocational Training Center. Modely ho an'ireo mpianatra vaovao 35 voasoratra anarana ao amin'ny programa izy ireo izao.
I Hilton dia niasa tao Myanmar nanomboka ny volana Oktobra 2014, taorian'ny fifanarahana lehibe niaraka tamin'ny Eden Group Company Limited hanokatra ny dimy amin'ny fananan'izy ireo amin'ny toerana manan-danja ao Myanmar. Nanokatra nanomboka ny Hilton Nay Pyi Taw, Hilton Ngapali Resort & Spa ary Hilton Mandalay, arahin'ireo fananana ao amin'ny Lake Inle, Yangon ary Bagan ao anatin'ny roa taona.
First Rolls-Royce Trent 7000 nalefa tany amin'ny Airbus Toulous
Miomana amin'ny hetsika fizahan-tany feno fitsaharana tsy mijanona ao Singapaoro